Izindlu ze-eclectic zigcwele ubuchule obunokuthi wonke umculi angathanda ukuba | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UCristina Zapata | | Ukuphefumlelwa
«Indlu encinci eFunky kwisithili sasePaseo» nguCassi LJ unelayisensi phantsi kweCC BY 2.0
Iisofa zeediliya, iitafile zohlobo lweshishini, uninzi lwemizobo enemibala emininzi ezindongeni, iiragi ezinemizobo yejiyometri, izityalo ezihombisa iikona ... Isitayile se-eclectic sihle ngakumbi kunangaphambili, kodwa ingaba iquka ntoni?
I-Eclecticism isekwe kumxube wezinto zeendlela ezahlukeneyo kunye namaxesha, ukufumana inkuthazo kwimithombo emininzi eyahlukeneyo enokuthi okanye engadibaniyo, ngohlobo lokuba iziphumo zokuhombisa ezizodwa kunye nezentsusa zenziwe, ngokobuntu bomntu oyithathileyo.
Igama elithi eclectic livela kwisiGrike kwaye lithetha 'okhethiweyo', ukusukela igcisa likhetha eyona nto linomdla wokuyimela kuyo yonke intshukumo yobugcisa. Isitayile esiza kuziva sikhululekile ngayo ukuphucula ubuchule bethu size ke sigcwalise zonke iimbombo zekhaya lethu. Izinto ze-morphology eyahlukeneyo, ubume, umbala ... amathuba anokuphela.
Kubalulekile ukuba ukusetyenziswa kwe-eclecticism kube nokulinganisela okuthile, oko kukuthi, ukuba ugcino lobugcisa alwenziwanga kumxube wazo zonke izinto.
Ke masibone imizekelo yezindlu zobuqu ze-eclectic eziphumelelayo kuthungelwano. Kuzo zonke, ukudityaniswa kwezinto ezahlukeneyo kudala imeko ebonakalisa ubuchule kuwo onke amagumbi. Ngamakhaya afanelekileyo okhuthazo lobugcisa, abasayi kusivumela ukuba sibe lusizi okomzuzwana!
1 Indlu kaRachael Havenhand
2 Indlu kaTasha evela kwiProjekthi yePocket Pretty
3 Indlu kaKim ngeeKimmes ezinemibala
Indlu kaRachael Havenhand
URachael Havenhand ngumculi oliNgesi onekhaya elileta yakhe ibalaseleyo. Kuyo sinokubona uvuyo kuyo yonke indawo. Imibala epinki kunye ne-lilac ezindongeni imile, iithoni zothando ezidityaniswe kakuhle nesofa ye-turquoise. Ngokwahlukileyo kwezi thoni zisisiseko, igcisa lisebenzisa imibala enemibala yejiyometri kwiiragi, amalaphu etafile nakwiindawo ezithile eludongeni. Kunye noku, sinokubona ubukho benani elikhulu leemisipha, esikhokelela kwisitayile se-bohemian esilawula uninzi lwendlu. Ezindongeni, zizele yimizobo ethi masibone ngakumbi ubuntu begcisa, sibona imo yaseMexico, izingqinisiso zemiboniso bhanyabhanya, izitayile zomculo kunye namagcisa anjengoFrida Kahlo. Ngubani ongafuni ukuhlala apha?
Indlu kaTasha evela kwiProjekthi yePocket Pretty
Enye indlu egcwele ubugcisa yile kaTasha. Le ndlu ime ngaphezu kwayo yonke ikhitshi layo lokuqala, Idibanisa iithowuni ze-lilac zodonga kunye ne-turquoise yefenitshala. Oku kuhamba netafile enemibala emininzi eneerekhodi ze-vinyl ezibonisa ukuba undwendwe ngalunye kufuneka luhlale phi. Iimpawu zejometri nazo ziyabonakala kuyo, njengoko sinokubona kwimifanekiso emnyama nemhlophe eludongeni nakwizixande zezixhobo zombane. Yintoni egqithisile, izinyuko yeyona yokuqala kwaye uphawu. Apha ungayibona ijiyometri, ilunge ngokugqibeleleyo kunye nokuhonjiswa kwayo yonke indlu. Yintoni e-eclectic ngaphezulu kwesi sinyuko?
Indlu kaKim ngeeKimmes ezinemibala
UKim woyilo usibonisa indlu yakhe emnandi, apho eyona nto iphawuleka kakhulu kwigumbi lokuhlambela. Sibona iithayile zohlobo lweediliya ezinombala, zenza umoya ochwayitileyo nolwamkelo. Igumbi layo lokuhlala nalo liyintsusa, kunye nezityalo, ubuninzi beemisila ezinemibala kunye nekhaphethi enkulu etshekishwe, izinto ezikhuthaza isitayile se-bohemian. Ubukho be-mandala yoyilo yomqamelo bubhekisa kubugcisa bamaHindu. Ezinye iikona zendlu zisibonisa iiragi zeediliya. Iindonga ze-navy eziluhlaza zahlukile kwinani elikhulu lepeyinti enemibala emininzi ebonisa ubume bangaphakathi bukaKim, apho singabona khona izingqinisiso zabazobi abanjengoFrida Kahlo kwakhona. Ukongeza, sibona izinto zendalo zesitayile se-bohemian kwizityalo, nakwifenitshala eyenziwe ngomthi okanye kwisitya seziqhamo embindini wetafile.
Izinto zeediliya, iihippie, i-bohemian, iArabhu, i-Nordic, i-minimalist ... ezo zikukhuthaza kakhulu kwaye zikugcwalise ngamandla kunye ne-vibes ezilungileyo zezona ziya kudibana nekhaya lakho le-eclectic. Ulinde ntoni ukuqala ukuyila?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukuphefumlelwa » Izindlu ze-eclectic zigcwele ubuchule obunokuthi wonke umculi angathanda ukuba nazo
Isiphithiphithi esicocekileyo yile ndlela "yomgaqo ongaphantsi" wesitayile semephu kaloliwe